KITRA AMINA TORA-PASIKA :: Manomana CAN any Mahajanga ny Barea Beach Soccer - ewa.mg
Foot - News - Sport - KITRA AMINA TORA-PASIKA :: Manomana CAN any Mahajanga ny Barea Beach Soccer
Mpilalao enina ambin’ny folo mirahalahy, ahitana mpilalao tranainy sy vaovao, no manoman-tena any Mahajanga, mialoha ny hiaingana ho any Ejypta amin’ny 6 desambra ho avy izao. Hotanterahina any amin’ ity firenen’i Faraona ity, amin’ny 9 – 13 desambra ho avy izao ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra, lalaovina amina tora-pasika na Beach Soccer.
Talohan’izao dia niatrika lalao tany Morondava, tamin’ ny anaran’ny klioba Gasikara Beach Soccer, ny ankamaroan’ ireo mpilalao noentin’i Solofo Tsiavahana, mpanazatra nasionaly. “Tsy ekipam-pirenena no noentinay tany fa klioba”, hoy izy.
Isan’ireo mpilalao efa tranainy ary efa voahosotra ho tompondakan’i Afrika tamin’ny taona 2015 tafiditra ao anatin’ireo hofantenana ho Barea i Jhorialy, Pierralit, Giovanni, Ymelda, Toky ary Dadah. Efa matetika voantso ary efa niatrika fifaninanana iraisam-pirenena kosa Chrétien, Marcel, Julio, Angeluc ary Enidiel. Nantsoina hanatevina ny ekipam-pirenena kosa i Hollas, Jean Jacques, Eusèbe, Honoré ary Romain.
Manana roa andro hizarana tany any Ejypta ireo mpilalao, mialoha ny hiatrehana ny fifaninanana. Hifanintsana ao amin’ny vondrona A i Madagasikara, Ejypta, Maraoka ary Côte d’Ivoire. Hiray vondrona kosa i Sénégal, Nizeria, Lybia ary Tanzania. Ny 9 desambra no hihaona amin’i Côte d’Ivoire ny Barea. Ny ampitso kosa no hifanandrina amin’i Ejypta, mialoha ny hiatrehana ny lalao fifa-nintsanana farany amin’i Maraoka ny 11 desambra. Hiatrika ny ampahefa-dalana ireo ekipa valo, aorian’izany ary hitohy hatramin’ny famaranana. Tamin’ny taona 2016 dia tafalatsaka ho any amin’ny laharana fahadimy ny Barea, izay nisalotra ny anaram-boninahitra tamin’ny taona 2015.
L’article KITRA AMINA TORA-PASIKA :: Manomana CAN any Mahajanga ny Barea Beach Soccer est apparu en premier sur AoRaha.
Beach Soccer - Kitra
63 taona CBT: hisy ny lalao amin’ny alina
Mitohy ary tsy hifarana raha tsy ny faran’ity volana desambra ity ny fifaninanana “Open”, taranja tsipy kanetibe, ho fankalazana ny faha-63 taona ny CBT (Club des Boulistes de Tananarive). Toy ny mahazatra, misy hatrany ny lalao isaky ny faran’ny herinandro eny amin’ny kianja filalaovana eny Mahamasina ary hiavaka kokoa ny amin’ity herinandro ity. Hisy mantsy ny lalao hatao amin’ny alina izay zava-baovao tokoa ho an’ny CBT. Tafiditra ao anatin’ny fanatsarana ny fifaninanana izany ary ezaka ho fanatsarana ny foto-drafitrasa ihany koa amin’ny alalan’ny fametahana jiro ao amin’ny faritry ny toeram-pilalaovana, raha ny fanazavana nentin’ny filohan’ny CBT, Raheriniaina Yves. Ny zoma alina izao no hisantarana ity lalao amin’ny alina ity ka haharitra mandra-maraina mihitsy ny fifaninanana. Raha hiverenana ny voka-dalao, nomontsanin’ny ekipan’i Hasina sy Daddy tamin’ny isa 13 no ho 12 ny tarik’i Tsiresy sy i Kola, omaly alahady. Nafana vay ny ady teo amin’ireto mpifanandrina ireto hatramin’ny fiafaran’ny lalao. Ho fankasitrahana azy ireo, notolorana lelavola 1 200 000 ariary ny mpandresy. Fankasitrahana izay avy amin’ny mpiara-miombona antoka amin’ny klioba. Marihina fa miezaka hatrany ny CBT amin’ny fanohanana ireo mpilalao mpandray anjara amin’ity fifaninanana ity. Mi.RazL’article 63 taona CBT: hisy ny lalao amin’ny alina a été récupéré chez Newsmada.
Madagasikara Tafaray : Mampandroso ny tontolon’ny rugby
Nanomboka omaly, tetsy Mahamasina, ny fifaninanana eo amin’ny taranja rugby, sokajy Elite 1 karakarain’ny fikambanana Madagasikara Tafaray, tarihin’ny filohany Mbola Rajaonah, sy ny Analamanga Rugby. Araka izany, ekipa sangany miisa valo avy amin’ny ligin’Analamanga no miatrika ny fifaninanana, ka avy hatrany dia manasa-dalana no nanombohana ny fifaninanana tamin’izany. Afaka nihanoka tanteraka tao anatina endri-dalao lalao sy fihaonana niady tsara ireo mpijery maro tonga teny Mahamasina tamin’iny omaly iny. Tanjon’ny fikambanana Madagasikara Tafaray kosa ny hampandroso sy hampiroborobo ny tontolon’ny rugby malagasy. Izany indrindra no nikarakaran’izy ireo ity hetsika miendrika fihantsiana eo amin’ny samy ekipa matanjaka sy sangany ity. Eo ihany koa ny fanomezana fifaninanana ho an’ireo ekipa, mba hisian’ny fifampikasohana matetika eo amin’izy ireo, mba ahafahany mivelatra eo amin’ny tontolon’ny rugby. Ankoatra izay, ny famatsiana fitaovana sy ara-bola ireo ekipa mba ahafahan’izy ireo mandroso hatrany… Araka izany, mitentina 3 tapitrisa Ar kosa ny loka hatolotry ny fikambanana Madagasikara Tafaray, ho an’ireo ekipa mandrombaka ny fifaninanana, raha 2 tapitrisa Ar ho an’ny ekipa resy ao amin’ireo lalao famaranana roa. Raha ny fanazavana mahakasika ny fizotry ny hetsika kosa indray, ekipa miisa valo no indray nikatroka ny lalao manasa-dalana omaly. Izany hoe, tsy nasian’ny mpikarakara fifanintsanana tamin’ity indray mitoraka ity, fa avy hatrany dia manasa-dalana. Araka izany, lalao famaranana roa no indray hotanterahina eo amin’ity fifaninanana ho an’ireo ekipa sangany avy amin’ny ligin’Analamanga eo amin’ny sokajy Elite I ity. Hotanterahina ny alahady 16 desambra izao kosa ireo lalao famaranana roa, ka tafita hiatrika izany ny Uscar, izay hifandona amin’ny FTMA Ankasina, andaniny, ary ny XV Family hihaona amin’ny Matadoria Anosipatrana. Teo amin’ny voka-dalao tamin’ny manasa-dalana indray, ny Uscar nandavo ny Tam Anosibe tamin’ny moka fohy, 41 noho 40, ary ny TFMA nanilika ny UASC tamin’ny isa mazava, 23 noho 13. Hiady tanteraka, araka izany, ireo lalao famaranana roa, satria samy tsy hisy hanaiky ho lembenana ireo ekipa efatra hiatrika izany. Samy hampiseho ny fahaiza-manaony sy ny tanjany ihany koa izy ireo mandritra izany, ka samy haneho ny endri-dalaony avy… MN L’article Madagasikara Tafaray : Mampandroso ny tontolon’ny rugby est apparu en premier sur .L’article Madagasikara Tafaray : Mampandroso ny tontolon’ny rugby a été récupéré chez Triatra.
Basikety – CACC: raraka teo amin’ny ¼ – dalana ny MB2All
Efa nampoizina ny valin-dalao ho an’ny ekipa malagasy, nandritra ny lalao ampahefa-dalana, amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika, ho an’ny ekipa tompondaka sokajy vehivavy, omaly. Niondrika teo anatrehan’ny Inter Clube avy any Angola ny MB2All, tany Maputo, Mozambika. Isa mavesatra no nandavoan’ny Angola an’i Madagasikara. Ny ekipan’ny Angola izay efa fanta-daza amin’ny fahaizana sy ny fananana haavo teknika ambony mihoatra amin’ireo ekipa mpifaninana rehetra nandray anjara tamin’ity fifaninanana ity. Etsy ankilany, ny Mb2All izay mbola vao sambany no nandray anjara tamin’ny lalao goavana toy izao, ka tsy dia nahagaga ny vokatra. Tsy nifan-danja rahateo koa ny halavana sy ny vatana teo amin’ny malagasy sy ny Angolais. Na izany aza, nahafa-po ny mpanazatra ny zava-bitan’ny ekipa malagasy. Raha hiverenana ny lalao omaly, hatrany am-piandohan’ny lalao dia efa nanatombo tamin’ny isa ny Inter Clube. Nitarika tamin’ny isa 20 no ho 7 ity ekipa ity tamin’ny ampahefa-potoana voalohany. Nanao izay ho afany ny MB2All nanenjika kanefa very maina izany satria nifanesy hatrany ny isa ho an’ny Angola ary nahitana elanelana maro mihitsy. 39 no ho 17 no nisarahan’ny roa tonta teo am-pialana sasatra. Vao maika nihanitombo ny herin’ny Inter Clube tamin’ny ampaham-potoana faharoa. Isa maromaro no tafiditra. Tsy afa-bela nanoloana azy ny MB2All ka niala maina teo am-pamaranana ny lalao. Isa mavesatra 84 no ho 46 no nisarahana ka nivoaka ho mpandresy ny ekipan’ny Angola, ekipa tompondaka imbetsaka nandritra ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika. Tapitra hatreo, araka izany, ny lalan’ny ekipa malagasy tamin’ity fifaninanana ity. Mbola mila manao fanazarantena hatrany anefa hiatrehana ny lalao fiadian-toerana. Nahafahana naka lesona sy nahazoana traikefa ny lalao izay natao tany Maputo, Mozambika ity, raha ny nambaran’ny mpanazatra, Rakotonanahary Ndranto. Nahafahana ihany koa namantatra ny haavo teknika ny mpilalao malagasy, indrindra taorian’ny fiatrehana ny fifaninanana N1A, farany teo. Mi.RazL’article Basikety – CACC: raraka teo amin’ny ¼ – dalana ny MB2All a été récupéré chez Newsmada.
Hafaliana ho an’ny vahoaka Malagasy taorian’ny fandresen’i Barea an’i Nigeria
Sary mampiseho ny hafalian'i Malagasy taorian'ny fandresen'i Barea an'i Nigeria. Sary nindramina avy amin'i Harry Tiana Teddy, Ets Steeve-net sy Orange Misaotra Barea, Alefa Barea, Miara mirona
KITRA – «CAF CHAMPIONS LEAGUE» :: Nanatanora ireo mpilalaony ny Cnaps Sport
Saika mpilalao tanora avokoa no nantsoina hanatevina ny ekipan’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana ara-tsôsialy (Cnaps Sport), tompondakan’i Madagasikara impito izay handray ny ekipan’ny FC Platinium, avy any Zimbaboe, amin’ny lalao savaranonandon’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika. Hotanterahina, anio, eny amin’ny kianja marolafin’i Vontovorona ity lalao mandroso ity. Isan’ireo mpilalao nantsoina hanatevina ny Cnaps Sport i Kalucha, izay mpilalao tanora dia tanora, mitana ny toeran’ny irakiraka mpanafika. Ankoatra azy dia niantso lohalaharana iray avy any amin’ny Ajesaia, Arnaud, taorian’ny nifindran’i Francis hilalao any ivelany. Nanampy irakiraka iray, Tojo, sy vodilaharana iray, Odon avy any amin’ny FC Vakinankaratra, ihany koa izy ireo hoentina miatrika ny fifaninanana kaontinantaly amin’ity taona ity. Lalao ara-pirahalahiana roa, tamin’ny AS Adema sy ny FC Disciples, no noentin’i Patrick Randriambololona na i Tipeh, mpanazatra ny Cnaps Sport, nitsapana an’ireo mpilalaony vaovao ireo. L’article KITRA – «CAF CHAMPIONS LEAGUE» :: Nanatanora ireo mpilalaony ny Cnaps Sport est apparu en premier sur AoRaha.
FANATANJAHANTENA MEKANIKA :: Nilaozan’i Adam Yachine tanteraka ny hazakaza-piarakodia
Misaona ny tontolon’ny fanamoriana fiarakodia. Nodimandry tampoka ny alin’ny talata hifoha alarobia lasa teo, noho ny fahatsentsenan’ny lalan-dra i Adam Yachine, fanta-daza eo amin’ity taranja ity. Mpanamory mpanampy an’i Freddy Rakotomanga, nanomboka ny taona 1985 no nahafantarana azy teo amin’ny tontolon’ny fanatanjahantena mekanika. Tamin’io taona io rahateo no nanombohany nifaninana teo amin’ny fanamoriana fiarakodia na “Rallye”. Efa niaraka tamin’i Fafah, tamin’ny fiarakodia Peugeot 304 Proto, ihany koa izy nandritra ny “Rallye Asacm 1992”. Io no isan’ireo fifaninanana ôfisialy nandraisany anjara voalohany, raha nanomboka tamin’ny “officiel technique” no nanombokany ny taona 80. Taorian’io dia efa nandrombaka ny anaram-boninahitra tompondakan’i Madagasikara teo amin’ny sokajy M11, tamin’ny alalan’ny Volkswagen Polo tamin’ny taona 2006 hatramin’ny taona 2009, niaraka tamin’i Freddy. Ny fiarakodia Isuzu D-Max no noentin’izy mirahalahy taty aoriana, ka mbola voahosotra ho tompondakan’i Madagasikara indray tamin’ny 2014 – 2015 ary lefitry ny tompondaka teo amin’ny sokajy T2. Efa niaro ny voninahi-pirenena tany amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika ny taona 2011 izy ary nandray anjara tamina dingana telo tamin’ireo dimy nanamarika an’ity fifaninanana kaontinantaly ity, tamin’ny alalan’ny Subaru Impreza. Teo amin’ny fitantanana indray dia efa filoha lefitry ny Federasiona malagasin’ny fanamoriana fiarakodia sy efa nitantana ny klioba Asacm i Adam Yachine. Omaly no nanitrihana ny nofo mangatsiakany teny Anjanahary rehefa avy noentina nomem-boninahitra farany teny amin’ny “mosquée” Ambatonankanga. Namela manano tena sy kamboty roa izy. Izahay eto amin’ny Ao Raha dia mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviany sy ny tontolon’ny fanatanjahantena mekanika. L’article FANATANJAHANTENA MEKANIKA :: Nilaozan’i Adam Yachine tanteraka ny hazakaza-piarakodia est apparu en premier sur AoRaha.
Boxe – “Lalaon’ny Nosy”: hanaovana ady fitsapana ireo mpikatroka
Taorian’ny fiatrehana ny tapany voalohany amin’ny fampivondronana ho fanomanana ny « Lalaon’ny Nosy », nanapa-kevitra ny hanao ady fitsapana ireo mpikatroka ny eo anivon’ny federasiona malagasy ny taranja boxe. Hotanterahina ny 27 sy 28 avrily izao izany, hijerena akaiky ny tena mendrika. Araka ny efa notaterina teto, misy ekipa roa ny hifanintsana amin’ity ady fitsapana ity. Ny ekipa A, ivondronan’ireo atleta voafantina hiatrika ny fampivondronana. Ny ekipa B kosa, ireo solontena isaky ny ligim-paritra manerana ny Nosy. Hamoaka mpikatroka iray isaky sokajy ny ekipa A raha toa ka mpikatroka miisa roa isaky ny sokajy kosa ny hotsongaina ao amin’ny ekipa B. Izay tena mendrika amin’izy ireo avy eo no handrafitra ny ekipa hiatrika ny “Lalaon’ny Nosy”. Ho hentitra tanteraka ny mpitsara amin’ity fitsapana satria tanjona amin’ity “Lalaon’ny Nosy” ity ny handrombaka medaly volamena maro, raha ny nambaran’ny filohan’ny federasiona malagasy, Rabarison Hery Mamy.Eo amin’izay fanomanana ny “Lalaon’ny Nosy” izay hatrany, nahazo fanampiana fitaovana avy amin’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny jeneraly Rakotonirina Léon Richard, ny mpikatroka, ny talata lasa teo. Gants miisa 20 sy “sac de sable” maromaro ny natolony tamin’izany. Mbola hisy ny fanampiana homen’ity minisitra mpiahy ny taranja boxe ity, ho fanohanana hatrany ny atleta malagasy. Mi.RazL’article Boxe – “Lalaon’ny Nosy”: hanaovana ady fitsapana ireo mpikatroka a été récupéré chez Newsmada.
Voka-dalao 21 Nov 2018 – Milwaukee Bucks vs Portland Trail Blazers
Bucks / 143 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval G. Antetokounmpo 30 13/20 1/3 6/9 5 11 16 9 1 3 3 0 33 48 K. Middleton 24 7/12 2/5 5/5 0 7 7 4 3 2 1 0 21 28 B. Lopez 20 1/3 1/3 0/0 0 1 1 2 4 0 3 0 3 1 E. Bledsoe 24 7/13 2/6 0/0 0 6 6 5 2 0 0 0 16 21 M. Brogdon 24 7/12 0/2 2/2 2 1 3 2 1 0 1 1 16 16 E. Ilyasova 12 0/5 0/3 0/0 0 4 4 1 5 0 0 0 0 0 C. Wood 11 5/6 1/2 0/0 1 4 5 2 0 0 0 0 11 17 T. Maker 21 4/10 3/7 0/0 2 6 8 0 2 0 2 1 11 12 M. Dellavedova 11 1/4 0/1 0/0 0 0 0 4 0 1 3 0 2 1 P. Connaughton 19 2/4 1/2 0/0 1 2 3 2 1 1 0 1 5 10 S. Brown 19 4/8 1/4 0/0 2 3 5 2 2 0 1 0 9 11 J. Morris 10 3/3 1/1 0/0 0 1 1 1 1 1 0 0 7 10 T. Snell 15 3/8 2/6 1/1 0 0 0 0 1 0 0 0 9 4 Total 57/108 15/45 14/17 13 46 59 34 23 8 14 3 143 Trail Blazers / 100 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval A. Aminu 26 1/13 0/9 2/2 1 8 9 0 3 1 1 1 4 2 J. Layman 9 1/3 0/2 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 -1 J. Nurkic 22 6/8 0/1 4/5 4 2 6 0 2 0 3 1 16 17 D. Lillard 31 5/12 1/6 11/13 0 4 4 5 2 0 4 2 22 20 C. McCollum 33 7/14 2/4 6/6 0 0 0 1 4 2 2 0 22 16 M. Leonard 16 2/4 2/3 0/0 0 4 4 0 0 1 1 0 6 8 C. Swanigan 11 1/5 0/1 0/0 1 3 4 0 0 1 1 0 2 2 Z. Collins 18 3/4 2/2 0/0 2 2 4 0 2 1 0 1 8 13 M. Harkless 13 1/5 0/4 0/0 1 2 3 0 4 2 0 1 2 4 W. Baldwin IV 12 2/7 1/1 0/0 0 1 1 3 0 0 1 0 5 3 E. Turner 22 2/6 0/2 0/0 0 2 2 3 1 0 0 0 4 5 A. Simons 12 1/4 0/1 0/2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 -5 N. Stauskas 16 2/8 1/6 0/0 0 2 2 1 1 0 1 0 5 1 Total 34/93 9/42 23/28 9 30 39 13 20 8 17 6 100